October 15, 2020 1139
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) व्यवसा’यमा लगानि बढाउदा मनग्गे लाभ हुनेछ । प्रतिष्ठित व्याक्तिुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नु’परेपनि अन्तत तपाईकै पक्षमा नतिजा आउँदा मन खुसि हुनेछ । पढन पाढनमा अलि मन नजादा गृहका’र्यहरु समयमा सकाउन मुस्किल पर्नेछ । रमाईलो यात्रा हुनेछ भने आफन्त तथा शुभचिन्तक’सँगको भेटले उत्साह जगाउँनेछ । प्रण’य सम्बन्धमा बिश्वास बढेर जाने तथा बिबाह मार्फत सम्बन्धलाई लामो समय सम्म टिकाउँन सकिनेछ । बिवाद तथा प्रतिस्प’र्धामा बिपक्षह’रुलाई हराउँदै अगाडि बढ्न सकि’नेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) सन्तान तथा परिवा’रले तपाईको काममा खासै सहयोग गर्ने छैनन् भने अपाईको आलो:चना गर्नेहरु बढ्ने ग्रहयोग रहेकोछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउँने हुँदा दैनिक काम गर्न अस:जिलो महशुस हुनेछ । माया प्रेममा धोका हुनेछ भने घर परिवारमा आफन्त तथा पति पत्नि बिच मन’मुटाब बढ्नेछ । व्यापार व्यावसाय खस्केर जाने हुनाले दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो हुनेछ भने प्रतिश्पर्धिहरुको अवरोधले फा’ईदाको सम्भावना टरेर जाने’छ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) घर जग्गा तथा पैत्रिक सम्पतिमा बिवाद बढ्ने ग्रहयोग रहेकोेछ भने सवारि साधन’को प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला नसोचेको घट्ना घट्न सक्छ । राजनीति तथा समाजसेवामा तपाईको प्रभाव कमजोर भएर जानेछ । व्यापार व्यावासायमा लगानि गरेपनि आम्दा’नि कम हुने हुदा दैनिकी प्रभावित हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । उच्च महत्वकांक्षाले समस्या निम्त’न सक्छ ध्यान दिनुहोला । प्रेममा सामान्य विवाद बढ्नेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) छोटो दुरिको परिणाममुखि यात्राको तय हुनेछ भने खेलकुद तथा अन्य क्रियाकला’पमा समय दिनेहरुले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उद्योग तथा व्यापा’र व्यावसाय:मा लगानि बढाई भनेजस्तो नाँफा कमाउँन सकिनेछ । माया प्रेममाको गाठो कसिलो हु:नुको साथै दाम्पत्य जीवनमा खुसियालि छाउँनेछ । पराक्रम बढेर जानेछ भने दाजुभाई तथा अन्य ईष्टमि:त्रबाट सहायोग हुने हुँदा मन खुसि रहनेछ । छोटो दुरिको यात्रा तय हुनेछ ।
सिहं (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) कामको सवाल’मा आफ्नै मानिससँग प्रतिश्पर्धा गर्नुपर्नेछ भने प्रतिश्पर्धामा अरुभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताइरहनेछ । प्रशस्त समय लगानि गरेपनि समयमा काम नबन्ने हुँदा मनमा निरासा पैदा हुनेछ । व्यावसा’यमा लगानि गरेप’नि आम्दानि थोरै हुने हुँदा दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो हुनेछ । माया प्रेममा धोका हुँन हुनेछ भने परिवारमा झै झग’डा हुने सम्भावना अधिक रहेको छ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) नयाँ प्रबि’धिको प्रयोग मार्फत व्यापार व्यावसायमा लगानि गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । आर्थिक अवस्था राम्रो हुने तथा पहिलेदेखि नउठेका रकमहरु उठ्ने’छन् । समाजसेवामा जनता सँगै रहेर काम गर्न सक्दा नाम कमाउन सकिनेछ । नया काम पा’उेन तथा नोकरिमा ब’ढुवा हुने योग रहेकोछ । माया प्रेममा एक अर्कालाई बिश्वास गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । कन्फि’डेन्ट पावर बढ्ने हुनाले पराक्रमि काम गर्न सकिनेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) समयमा काम नबन्ने हुनाले आर्थिक पाटाहरु कमजोर रहनेछन् । लेनदेनको बिवा’दले आत्म सम्मानमा दाग लाग्न सक्छ ख्याल गर्नुहोला । टाडाको यात्रा हुने भएपनि यात्राको क्रममा दुख पाईनेछ । बिदेशमा बसेर काम गर्नेहरुका लागि वा बिदेशी सामानको व्यापार गर्नेहरुका लागि समय राम्रो रहेकोछ । शरिरमा आलश्यता बढेर जानेछ भने भौतिक तथा बिला’शी बस्तु हरा:उन सक्छ ख्याल गर्नुहोला ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) पछिसम्म फाईदा हुने व्यापार व्यवसायमा लगानि गरि आम्दानि सुनिश्चित गर्न सकिनेछ । आर्थिक अभावले रोकिएका काम’हरु तिब्र गतिमा सञ्चा’लन हुनेछन् । स्रोत साधनको प्रयोग गरि अग्रगामि छलाङ मार्न सकिनेछ । बैक तथा बित्तिय पेशासँग सम्बन्धित कामहरुबाट आम्दानि बढा’उन सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने जीवन साथि’सँग थप आत्मिय भाव बढ्नेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) इच्छाशक्ति बढ्नुका साथै काममा उत्साहजनक समय छ। प्रयत्न गरेको काम छिट्टै पुरा हुने:छन् भने समयमो सदुपयोग गरि मनग्गे: लाभ लिन सकिनेछ । साथिभाईहरुको सहयोग पाईनेछ भने आफन्त तथा प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। प्रतिष्ठा, मान–सम्मान आदि पाइने समय छ। नयाँ वस्त्र र स्वा:दिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ। परिवारजनसँग आत्मी:यता बढ्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिएर जाला।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) धार्मिक कार्य तथा परोपकारमा मन जानेछ। खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा कमजोरी अनुभव हुनेछ। खराब आचरण भएका व्याक्ति:हरुले फसाउने तथा केही बाध्यात्मक परिस्थिति:सँग सम्झौता गर्नुपर्ला। आशा देखाउनेहरूको भरपर्दा काम बिग्रनेछ । धार्मि:क क्षेत्र तथा परोपकारी काममा सहभागि भई काम गर्ने अवसर जुर्नेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) पुराना लगानि गरि:एका रकमहरु एठ्नाले अन्य क्षेत्रमा लगानि गर्ने बाटो खुल्नेछ । माया प्रेममा एक अर्कालाई केहि समय शंका तथा अबिश्वास गरेपनि अन्तत बिश्वास गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने समाजसेवामा पनि समय खर्च हुनेछ । लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा हुने प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ भने बिदेशमा बसेर प्रावि:धिक शिक्षा अध्ध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने समय फलदायि रहेकोछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) सुखदुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् भने परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ। विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ। आयआर्जन पनि राम्रै हुनेछ। अतिथिका रूपमा सम्मान प्राप्त हुन सक्छ। रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुट्नेछ। कामबाट पनि फुर्सद पाइनेछ। व्यापारकै शिलशिला’मा यात्रा हुने योग रहेकोछ ।
Prevदुःखद खबर – कोरोना संक्रमणले एकै परिवारका ३ जनाको मृ’त्यु
Next६७ बर्षीय भजन सम्राट अनुपको विवाह ३० बर्षीया आफ्नै शिष्यासँग..?
यी बालकको महिनाको आम्दानी १८ करोड ! मोबाइल बाटै गर्छन् यस्तो काम
पछिल्लो २४ घण्टा भित्र